လိင် / Porn စွဲ - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်သင်၏ ဦး နှောက်အပေါ် AASECT ရာထူးဖော်ပြချက်မှထုတ်ဖေါ် Backstory
လိင်ပညာပေး, အတိုင်ပင်ခံနှင့်အထူးပြုကုသ၏အမေရိကန်အသင်း (AASECT) သူတို့သည်လိင်နှင့်စွဲလမ်းမှုအပေါ်“ သမိုင်းဝင်အနေအထားကြေညာချက်” တစ်ခုအနေဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဘာပြောနေသည်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကြေငြာချက်၏ဗဟိုချက်တွင်အဖွဲ့အစည်းသည်လိင်စွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုစိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုရန်လုံလောက်သောပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများမတွေ့ရဟုဆိုသည် လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းနည်းလမ်းများနှင့်ပညာရေးသင်ကြားရေးသင်တန်းများအား“ တိကျသောလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာဖြင့်လုံလောက်စွာအသိပေးခြင်းမရှိပါ။ ” (အပြည့်အဝဆောင်းပါး Link ကို)
ထိုကဲ့သို့သောနယ်ပယ်, အလေးချိန်နဲ့အာဏာကိုတစ်ဦးကြေညာချက်အဘို့, သင်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုသတိထား, ဘက်မလိုက်နှင့်ပူးပေါင်းပြန်လည်သုံးသပ်ရာအရပ်ကိုယူခဲ့သောထင်လိမ့်မယ်။
ဒီကြေညာချက်နောက်ကွယ်ကလုပ်ငန်းစဉ်အစပျိုးသောသူအားဖြင့်တစ်ဦးသိသိသာသာလင်းလင်းနှင့်အများပြည်သူဝန်ခံချက်မှာတော့ "ဆိုတဲ့အဆိုပါ AASECT လိင်စွဲလမ်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက် Created ခဲ့မည်သို့ကျွန်တော်တို့ဟာအများအားဖြင့်ကိုယ်နှိုက်များအတွက်ပြောတတ်ထင်တဲ့သမိုင်း - "မိုက်ကယ်သည်အာရုန်တစ်ခုလုံးကိုကြေညာချက်နောက်ကွယ်မှဖြစ်စဉ်သို့အသေးစိတ်ဝင်းဒိုးကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
မတူကွဲပြားသောအဖွဲ့များ၏သက်သေအထောက်အထားများကိုဂရုတစိုက်ပြန်လည်သုံးသပ်မည့်အစား၊ အာရုန်၏ကိုယ်ပိုင်ဝန်ခံချက်အားဖြင့်ဤကြေငြာချက်သည်သူကိုယ်တိုင်နှင့်“ သူရဲကောင်းစာရင်း ၀ င်သောလှုံ့ဆော်သူ” များ၏သေးငယ်သည့်“ အွန်လိုင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကြိုးပမ်းမှုများ” မှပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ AASECT Listerverv တွင်, ဤအုပ်စုငယ်သည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှည့်ဖျားကာအာရုန်အား“ renegade, ပြောက်ကျားနည်းဗျူဟာများ” ဟုသူကတမင်တကာ“ ရန်လိုခြင်း” ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးအဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိပုံမှန်နှင့်ပြင်းထန်သောအငြင်းပွားမှုများကိုလှုံ့ဆော်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ သူ့ကိုယ်ပိုင်စကားဖြင့်
"ငါ့ကိုစေရန်, အငြင်းပွားဖွယ်ရာသည်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအခွင့်အလမ်းပါပဲ။ "
Listerv တွင်လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သော post တစ်ခုပေါ်တိုင်းအချိန်တိုင်းကျွန်ုပ်၏ဖုန်းတွင်သတိပေးချက်များကိုတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်နိုင်သမျှပြန်လည်တုန့်ပြန်မှုအမြောက်အများထွက်ပေါ်လာစေမည့်လှုံ့ဆော်ပေးသောဘာသာစကားကိုဖန်တီးရန်တမင်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။
"[ပိုကောင်း] တစ်ဆပ်ကပ်လေထု၏ပို။ "
ဤဖြစ်စဉ်အားလုံးသည်, အာရုန်နှင့်အညီ, နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောခဲ့ "အမြန်ပြောင်းလဲမှုပါစေ။ "
အလားတူကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဖွယ်ရှိ featuring အဆိုပါ AASECT နွေရာသီအဖွဲ့အစည်းသို့သွားလေ၏ သာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းမှဆန့်ကျင်သောတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများဖြစ်သည့် David Ley၊ Joe Kort နှင့် Nicole Prause
ကျနော်တို့တခြားနေရာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းရှိပါတယ် 27 အာရုံကြောလေ့လာမှုများ နှင့် စာပေဒ 10 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ညစ်ညမ်း၏စွဲလမ်းအလားအလာအတည်ပြုအားလုံးသော။ အနည်းဆုံး 17 လေ့လာမှုများ တစ်ဦးအပိုဆောင်းနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများ၏ကျယ်ပြန့်-range ကိုမှ link ကိုညစ်ညမ်း, 34 လေ့လာမှုများ လျော့နည်းသွားကြားဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုမှ porn ချိတ်ဆက်။
ဤလေ့လာမှု ၉၈ ခုသည်“ သိပ္ပံပညာ” မျှသာလား။ ရှိပါတယ် ဤ AASECT အပြင်းအထန်တောင်းဆိုသုတေသနလေ့လာမှုများကြီးမားသောပြဿနာတရပ်၏တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုဖို့ "လုံလောက်သော" ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော
အောက်ခြေလိုင်း: ကတစ်နည်းနည်းနဲ့ (တသမတ်တည်း) ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုသိသိသာသာကြီးမားငွေပမာဏကိုချွတ်ရေးသားခြင်းမရှိဘဲတစ်ကယ့်ပြဿနာတည်ရှိငြင်းပယ်ရန်ခက်ခဲပါတယ်။
ဤသည်သင်တန်း၏, အဖြစ် "အထောက်ကြည်ကြည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ pathologize" ရန်ကြိုးစားနေသကဲ့သို့, တူညီသောအရာမဟုတ်ပါဘူး AASECT ဖွငျ့ဖျောပွထားသညျ့ - တစ်ခုခုအများဆုံးစွဲန်ဆောင်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာရှောင်ရှားရန်သတိထားဖြစ်ကြသည်။ အမှန်စင်စစ်ညစ်ညမ်းစွဲ "စစ်မှန်သော" ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါရဲ့ဟုတ်မဟုတ်ထက်ကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ 
အရည်အသွေးမြင့်မားသောစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမရှိခြင်းကြောင့်၎င်းဂုဏ်ထူးများကိုလျစ်လျူရှုခံရခြင်းမှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း AASECT အစီရင်ခံစာရေးသားသူများသည်သူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီမည့်နောက်ထပ်စကားပြောဆိုမှုမျိုးကိုအတိအလင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
အတွက်အသိအမှတ်ပြုအဖြစ် အာရုန်၏ရေးသားမှုတက်မတူကွဲပြားသောအသံများ၏ပါ ၀ င်မှုကြောင့် AASECT ၏ယခင်သဘောတူညီမှုကြေငြာချက်သည်သူတို့၏ ဦး စားပေးအနေအထားမှဝေးကွာသွားခဲ့သည်။  အာရုန်နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ထပ်တူအမှားမျိုးမကျူးလွန်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားကြသည်။ ဒီတော့ဒီတစ်ကြိမ်မှာ၊ ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်ထား "ငါစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသောတစ်ဦးချင်းစီကသာသေးငယ်တဲ့အုပ်စုလူတစ်ဦးနှုန်းသုံးခုကြေညာချက်ပေးပို့ရန်နှင့်ဂရုတစိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ parameters တွေကို define လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုအကြံပေးခဲ့သည်။ ": သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးနှောင့်အယှက်မပြုခဲ့ကြောင်းတုန့်ပြန်ချက်အဘို့ process ကို
ထိုအရပ်၌သင်ရှိသည်! တစ်ဦးက "သဘောတူညီမှု" ကြေညာချက်မွေးဖွားသည်။
၎င်းတို့၏အကြွေးစေရန်, အာရုန်နှင့်အခြားပါဝင်နေတုန်းပဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောတစ်တက်ကြွဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏တည်ရှိမှုအသိအမှတ်ပြုသည်။ အာရုန်သည်ရေးသားခဲ့သည် "လိင်စွဲလမ်းဟာအလွန်အငြင်းပွားဖွယ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့် sexological နှင့်လိင်စွဲလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်အပူဆွေးနွေးငြင်းခုံတစ်ဘာသာရပ်ပါပဲ။ " နောက်ထပ်စာရေးဆရာ, မှ Ian Kerner, ကျေးဇူးတင်ကြောင်း သူတို့ "ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ပြန်ချက်၎င်းတို့၏အတိုက်အခံပါတီဖော်ပြနိုင်ရန်ယုံကြည်ချက်ရှိခဲ့သူကိုခိုင်ခံ့, အသံ။ "
အာရုန်၏မပါဘဲ ပိုင်ဆိုင် "ရန်လို" နှင့်အတိုက်အခံ override ဖယ်အပူဆွေးနွေးငြင်းခုံတွန်းသည်, မိမိကောက်ချက်ဆန့်ကျင်သုတေသနတစ်ခုကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်ပယ်ချခြင်းနှင့် indubitable သဘောတူညီမှုတစ်ခုသဏ္ဌာန်ပရောဂျက်ဖို့အသုံးပြု "ပြောက်ကျား" နည်းဗျူဟာအဲဒီကတခြားအသံတွေကိုပင်ရရှိလာတဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြခြင်းငှါ,!
အမှန်စင်စစ်တဦးတည်းကိုဘယ်လိုမသိမသာကွဲပြားနှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေသည့် AASECT ကြေညာချက်တွေးမိဖို့ရှိပါတယ် ခွန်အား အားလုံးအသံတွေကိုနှင့်အမြင်များတန်းတူကစားခွင့်ပြုခဲ့ခဲ့၏ပေါများကြွယ်ဝခဲ့ဖြစ်လာကြပါပြီ။
 အထူးသမိုက်ကယ်အာရုန်သည် ကပြောသည်“ လိင်စွဲလမ်းမှုသည်အကျိုးအမြတ်များသောလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ အလွန်စျေးကြီးသောအတွင်းလူနာစင်တာများနှင့်ပြည့်စုံသည်။ လိင်စွဲလမ်းမှုကိုထောက်ခံသူသည်ထိုပုံစံကိုပျက်ပြားစေရန်မက်လုံးပေးသည်ဟုရိုးသားစွာထင်မြင်ပါသလား။ ” သူကဆက်ပြောသည်မှာ“ သင်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်များကြောင့်အမြဲတမ်းခြိမ်းခြောက်နေသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောဘာသာစကားသည်အကျိုးမဖြစ်ထွန်းပါ။ ” ဘာသာပြန်ချက်: လိင်စွဲလမ်းနှင့်အတူလူကူညီပေးနေအထူးပြုကုသလွန်းလမျးစက civilly ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပူပေါင်းပြီးလုပ်ကိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတကယ်အသုံးမယ့်သူတို့ရဲ့လစာအားဖြင့် biased ကြသည်!
အကယ်၍ ၎င်းသာမှန်ကန်ပါကအခြားဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာမက်လုံးများကအလားတူအရည်အချင်းမပြည့်မှီမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်လော။ သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဝန်ခံချက်အရလိင်ကုထုံးပညာရှင်ဖြစ်ရန်ပြင်ဆင်မှုများတွင်ငွေများစွာပါဝင်သည် -“ CST အနေဖြင့်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း AASECT အတွက်အခကြေးငွေများစွာပေးဆောင်ရသည်။ ငါ၏အလက်မှတ်ကိုစောင့်ရှောက်။ " သူတို့ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအတွက်ပြန်ပေးတာကလိင်ကုထုံးပညာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကုသမှု ၀ န်ဆောင်မှုတွေကြောင့်စကားလက်ဆုံပြောဆိုသူအဖြစ်မယုံကြည်နိုင်တာကိုဆိုလိုတာလား။
Multi-ဒေါ်လာဘီလီယံညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်၎င်း၏ Multi-level ကိုအမေရိကန်တွေထင်ပုံကိုကျော်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ဆွေးနွေးချက်: အဆိုပါပိုကြီးတဲ့ပြဿနာဒါခေါ် "အကျိုးအမြတ်" လိင်စွဲလမ်းလယ်ဒီအာရုံကိုငြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့စကားပြောဆိုမှုအပေါ်ပိုမိုကြီးမားသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်အဘယ်အရာထံမှ distracts ပုံ လိင်နှင့် ပတ်သက်. ။
 ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မှု AASECT ကြေညာချက်အတွင်းကြောင်းအချက်ပေါ်တွင်မရေရာဒွိဟမှအဲဒီနှစ်ခုကြားကကွာခြားချက်ကြေညာချက်နှင့် ပတ်သက်. အများပြည်သူဆွေးနွေးမှုမှာအားလုံးဖွင့်ခြင်းကိုမရ။ တဦးတည်းအတွက် တစ်ခုတည်းရုပ်မြင်သံကြားသတင်းအစီရင်ခံစာ ကြေညာချက်အပေါ်, ဒီသူတို့ကအကျဉ်းချုံးဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်:
·"သင် porn သို့မဟုတ်လိင်စွဲရနိုင်သလား?"
·"ဒါဟာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူး။ "
အများပြည်သူရဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့, ညစ်ညမ်းစွဲငြင်းပယ်တဲ့ "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ" သည်၎င်း၏တည်ရှိမှုငြင်းပယ်ဖြစ်ပါတယ်။
 မိုက်ကယ်အာရုန်သည်နှင့်အမျှ ဖော်ပြထား ကယခင်အားထုတ်မှု "လမ်းကြောင်းအပေါ်အသင်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြောင့်ကြေညာချက်ပုံဖော်ဖို့ရှာကြံလူထုကိုထင်မြင်ချက်များကိုများစွာသောလူတစ်ဦးရောက်လာရန်ပရမ်းပတာနှင့်အရပ်ဌာန၌မဆိုစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အားမရှိဘဲ။ " ရင်ဆိုင်ခဲ့